Ukukhulisa / ukulungisa iinwele？
Izinwele ezomileyo nezinamachaphaza, xa imozulu imanzi, ungasoloko usiva isandi se-“papapa” emnyama, engathandekiyo kwaye engathandekiyo.
Iinwele ezithandekayo ziya kukwenza wonwabe, kwangaxeshanye, kuya kubakho imo ngakumbi ukonwabela umzuzu.
Nangona kunjalo, usebenzise uninzi lweemeko ezithile kunye neemaski zeenwele, kodwa isiphumo asikakulindelwa. Ukhe wacinga ngokuzama iindlela ezintsha zononophelo?
Ukhathalelo lweenwele IBHAKATHI
I-DoZRAN-Ukutya okunesondlo okufanelekileyo kweoyile
Ukunyameka iinwele nge-oyile ezininzi zeoyile
Unakekelo lokondliwa kweenwele olunokwenziwa ekhaya alusebenzi kangako kune- "package yesondlo" yeivenkile zokucheba zeenwele, ezilungele ngakumbi kwaye zisempilweni.
Ngaba uyazi ukuba ukongeza kwi-facials, ukhathalelo lolusu lomzimba, kunye ne-aromatherapy, iioyile ezifanelekileyo nazo zingasetyenziselwa ukhathalelo lweenwele, ezondla iinwele kunye neefollicles zeenwele zizonke, ukuze iinwele zibhetyebhetye kwaye zintle, zondle isikhumba, kwaye zomeleze. iingcambu zeenwele.
Iingcali zonyango zihlala zithanda kwaye zilungile ekusombululeni iingxaki ngeoyile efanelekileyo, kuba zikhetha indalo, impilo kunye nezinto ezintle. Ngokuphathelele iinwele, bathi: Ewe, inokuxazululwa ngeoyile eyimfuneko!
Iingxaki zesondlo yeyona ngxaki iphambili yeenwele ezomileyo
Izinwele ezomileyo kulula ukusonga, okuthetha ukuba ubomi beenwele busongelwe, kwaye uninzi lwezizathu zibangelwa kukungondleki ngokwaneleyo, okukhokelela ekulahlekelweni kwamanzi, iiproteyini kunye nezinto ezithile zomkhondo, ezenza ukuba iinwele zihlambe kunye nomgangatho weenwele owonakalisiweyo.
Unonophelo olungafanelekanga ikwangunobangela weenwele ezomileyo. Ukuhlamba rhoqo kwaye ukudaya rhoqo inokubangela nokonakala kweenwele, zenze iinwele ziqine kwaye zomile.
Uxinzelelo lomsebenzi olongezelelekileyo, ngakumbi ezo ebesebenzisa iikhompyuter ixesha elide, yibanonophelo oluphezulu loqwalaselo. Ixesha elingaphezulu, ingqondo iya kuhlala ivuya.
Ngenxa yoko, inkqubo ye-endocrine enxulunyaniswa nokukhula kweenwele iyachaphazeleka, okukhokelela ekukhusekeni okuphezulu kwe-sebaceous gland secretion, blocking follicles zeenwele, kwaye ukwenza iinwele zomile kwaye zomile.
I-DoZRAN-Ukutya okunesondlo okufanelekileyo kweoyile, edityaniswe neentlobo ezahlukeneyo zeoyile efunekayo, inokondla ngokufanelekileyo iinwele kunye neefollic zeenwele kwaye incede ukubuyisela iinwele kukhanye, ukuthamba, ukuzala kunye nokuqina.
Izithako zeoyile ezifunekayo ukuze kuxhaswe ngokupheleleyo izondlo eziyimfuneko kwiinwele
Ezinye izinto ezikwimo yesiqhelo kulula ukuhlala zihleli elukhumbeni, zibangela ukuba iinwele zibe zivalekile, ebangela ukuba amasuntswana amanqatha kunye neenwele ziphume.
Iimpawu ezininzi zinobuthathaka obunamandla, kwaye akunakuthinteleka ukuba banxibelelane nesikali ngexesha lokusebenzisa, okuya kudala ukonakala ixesha elide.
I-DoZRAN-Ukutya okunesondlo okufanelekileyo kweoyile, ayinayo ioyile yesilicone, isiseko kunye nezinye izithako. Isekwe kwioli yendalo exabisekileyo kwaye isetyenziswe ngqo kwizinwele. Inokwenza umaleko okhuselayo weoyile eyimfuneko, ngelixa iphinda iphinde ifumane ukondla kweenwele, iphinda ibuyise iinwele ezonakeleyo.
Iimolekyuli zeoyile ezixabisekileyo ezinokukhuthaza ukuhambahamba komzimba womntu, ukuthomalalisa imeko yokuphumla kwengqondo, kunye nokugcina impilo yomzimba nengqondo.
Yintoni imfihlo ye-DOZRAN-Isisityebi se-Oile esifunekayo?
// kwiresiphi //
Xa kuthelekiswa neekhemikhali ezikwimo yesiqhelo yokunyanga, iaromatherapy Therapists ngokwemvelo zikhetha ukusebenzisa ioyile efanelekileyo kunye neyendalo ukufezekisa iinjongo zokuma kweenwele. Ukuchongwa kweefomula ezifanelekileyo zeoyile ngokwemvelo kubaluleke kakhulu.
Ukufezekisa isiphumo esifunekayo engqondweni, iqela labacebisi ngephunga baphinda bavavanya kwaye baguqula ifomula, kwaye ekugqibeleni bathatha isigqibo sokusebenzisa ioyile yembewu yomdiliya kunye neoyile yekhokhonathi njengeoyile yesondlo. Ngeoyile yejinja, ioyile yamagqabi erosemary, ioyile ylang-ylang njengeoyile yesiphumo. Ukujongana nokuoma kweenwele, i-frizz, kulula ukuwa kunye neminye imiba, yenza unyango olujolisiweyo.
Ioyile yembewu yomdiliya kunye neoyile yekhokhonathi inokubonelela ngesondlo esifunekayo ezinweleni, kwaye ioyile yamagqabi erosemary iyakwazi ukuhambisa amanzi inwele kwaye yenze iinwele zithambe kwaye zithambe.
Ijinja yengcambu Unokulungisa iinwele ezomileyo nezinokwahlulwa, kwaye Ylang Ylang oyile inokwenza iinwele zimnyama kwaye zihle.
Ioyile eziyimfuneko nazo philisa umzimba nengqondo ngelixa ukhusela iinwele. Iimolekyuli ezizodwa ezibengezelayo zinokungena emzimbeni ngomphunga kunye nolusu, lowo kunciphisa ukudinwa kunye nokucoca imo yeemvakalelo. Yondla, ukusuka ngaphandle ukuya ngaphakathi.
Ukuba uqhubeka ukuyisebenzisa ixesha elide, ukomiswa kweenwele, iziqhekeza zesiphelo, kunye nefrizz ebangelwa ukuvumela nokudaya ingalungiswa ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile.
Ukusetyenziswa kwexesha elide kunokwenza iinwele zomelele, zithambe kwaye zikhazimle, kwaye zikhuphe ivumba elihle lendalo.
Amava amatsha okukhathalela iinwele, ukulungele ukuzama?